နှစ်ယောက်နှင့်တစ်နှစ်ခွဲအမျိုးသားရာသီ ၉-၇ '' THE FANCY JAPANESE TOILETS '' ပြန်လည်စုစည်းခဲ့သည် - တီဗီ
နှစ် ဦး နှင့်တစ်နှစ်ခွဲယောက်ျားရာသီ 9-07 '' သူတို့အားဖန်စီဂျပန်အိမ်သာ 'ပြန်လည်သိမ်းယူခြင်း
ယခုအပတ်အမျိုးသားနှစ် ဦး နှင့်တစ်နှစ်ခွဲ Ashton Kutcher သည် Holland Taylor နှင့်အတူအိပ်ရာဝင်ခဲ့သည်ကိုပြသခဲ့သည်။ သို့သော်သူသည်မမြင်ရသောချာလီ Harper ဖြစ်သည်။
ငါပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကဇာတ်လမ်းတွဲခေါင်းစဉ်အပေါ် fixated သိပေမယ့်တကယ်တော့ခေါင်းစဉ်အိမ်သာနှင့်အတူတစ်ခုခုနှင့်ပတ်သက်။ ရသောအတန်းအတွက်နှစ်ပတ်အတွင်း? အဲဒါတကယ်လိုအပ်လား
ဘေးဖယ်ချွတ် - ချပြီးဇာတ်လမ်းတွဲခေါင်းစဉ်, ယခုအပတ်ရဲ့ နှစ် ဦး နှင့်တစ်နှစ်ခွဲယောက်ျား ၏ပြန်လာနှင့်အတူအစာရှောင်ခြင်းနှင့်ရယ်စရာစတင်မှပယ်တယ် ဟော်လန်တေလာ အလန်ရဲ့ ( Jon Cryer ) မေမေ, အီဗလီန် Harper ကို။ အလန်ကသူမ၏အိမ်မှ Walden နှင့်အတူသူ၏အိမ်မှထွက်ခြင်းနှင့်ကမ်းခြေအိမ်သူအိမ်သားမှသူ၏လမ်း weaseled ကတည်းကကျနော်တို့အီဗလီန်မြင်ကြပြီမဟုတ် ( အက်ရှတန်ကတ်ချာ ) ။
Cryer နှင့်တေလာအကြားအဖွင့်ပွဲမှာတေလာသည်အလန်၏များစွာသောအားနည်းချက်များ၊ အထူးသဖြင့်ကမ်းခြေအိမ်ရှိသူ၏အခန်းကိုတွယ်ကပ်နိုင်ခြင်းကဲ့သို့သောထူးခြားသည့်ပြက်လုံးများနှင့်ပြည့်နှက်နေသောပြက်လုံးများနှင့်အတူတေလာအားထပ်ခါတလဲလဲရိုက်ခတ်စေခြင်းအားဖြင့်အလန်ကိုရိုက်နှက်ခြင်းနှင့်အတူမြန်ဆန်စွာရယ်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။
နောက်ဆုံးတော့ချာလီကသူ့ကိုအမှန်တကယ်လိုချင်တဲ့အရာမဟုတ်ပေမယ့်တကယ်တမ်းချန်ထားခဲ့လို့အဲဗ်လင်က Alan ကိုသွားတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ ထွက်ပေါ်လာတဲ့အရာကချာလီဟာပက်မှာသူဟာဂျာနယ်တစ်စောင်ကိုသိမ်းဆည်းထားခဲ့တဲ့အတွင်းစိတ်ဘဝမှာရှိခဲ့တယ်။ သဘာဝကျကျ, အလန်မရှိခဲ့စာမျက်နှာများအကြားငွေသားရှိမရှိစစ်ဆေးသည်။
အဘယ်ကြောင့် Disney ပေါင်းအပေါ် hulk မဟုတ်ပါဘူး
သင်ဖတ်နေလျှင်ကျွန်ုပ်နှလုံးသားနှင့်အဆုတ်များနောက်ဆုံးမှထုတ်ပစ်လိုက်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ ဒါမှမဟုတ်ငါအသည်းအသစ်ကိုငြင်းပယ်ခဲ့တယ် ဒါမှမဟုတ်ငါ့အစ်ကိုငါ့ကိုသူတစ်ဖဲ့ကိုရခြင်းမပေးလိမ့်မယ်။ သို့မဟုတ်ငါသည်ငါ့ကိုယ်ပိုင်အန်သို့မဟုတ်အခြားတစ်စုံတစ်ယောက်အပေါ်ဆို့။ ဒါမှမဟုတ်အရူးတစ်ကောင်ကကျွန်တော့်ကိုဘတ်စ်ကားရှေ့မှာတွန်းတယ်။
ကြောင်းနောက်ဆုံးလိုင်းမှအလန်ရဲ့လှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်မှုညဉ့်များ၏ကြီးမားသောရယ်မောခြင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူများသောဖန်စီဂျပန်အိမ်သာများမှအီဗလီန်သည် dopey Walden ကိုသွေးဆောင်ဖြားယောင်းခြင်းအားဖြင့်ခြေဆွံ့သောလုပ်ရပ်ကိုကြိုးစားစဉ်တွင်အကောင်းဆုံးပြုံးရယ်မှုများသည် Alan သို့ချာလီ၏ဂျာနယ်ကိုဖတ်နေခြင်းမှပြန်ပေါ်လာသည်။
ဒါဟာပန်ကာသံသယကိုအတည်ပြုနီးပါးလုံလောက်ပါတယ် နှစ် ဦး နှင့်တစ်နှစ်ခွဲယောက်ျား တကယ်ပျောက်နေတယ် ချာလီ Sheen ။ Charlie Harper ဟာသေသွားပေမယ့်အဖြစ်အပျက်မှာအကြီးမားဆုံးပြုံးရယ်မှုတွေကြုံခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကနေသင်ဘာတွေကိုဖယ်ရှားပစ်နိုင်မလဲ။
ဂျake ( Angus တီဂျုံးစ် ) ဒီဇာတ်လမ်းတွဲ၌သူ၏အပျိုစင်ဆုံးရှုံး? ငါကမည်သည့်လမ်းအတွက်အရေးပါပါတယ်နှင့်စာရေးဆရာများကအရေးပါထင်ရန်မထင်ခဲ့ပေမယ့်ကြင်နာ၏ထင်ရှားသောသလိုပဲ။
ငါ Walden နှင့်အီဗလီန်၏ပုံပြင်အကြောင်းကိုပျော်မွေ့သောတစ်ခုတည်းသောအရာတစ်ချိန်ကဇာတ်ကောင် Walden ဘယ်လောက်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အကြောင်းပြောဆိုရန်အတင်းအကျပ်မခံခဲ့ရသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဟော်လန်တေလာ သူသည်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်ချစ်ခင်မြတ်နိုးမှုအတွက်အားကစားအဖြစ် Walden အားကြောက်ရွံ့ခြင်း၊
သူကပြောပါတယ်, ငါတို့တစ်စုံတစ် ဦး က Kutcher ရဲ့အချည်းနှီးသော ဦး ညွှတ်ခြင်းမရှိဘဲတစ်ပါတ်မသွားနိုင်သဖြင့်, အရှင်ကျွန်တော် Jake ရဲ့နည်းပြဆရာ / နှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရ Megan ( Macey Cruthird သူသည်အနီးတစ်ဝိုက်ရှိလူနှင့်အနီးဆုံးဖြစ်သောကြောင့်သူမက Jake နှင့်အတူအိပ်ကြောင်း Walden ၏ကောင်းသောရူပမှုဖြင့်ဖွင့်ထားသောသူ) ။
FYI, ဝေါလ်ဒန်သည်ယခုအပတ်၌အဝတ်အချည်းစည်းလှည့်ပတ်မသွားခဲ့ပါ။ သူသည်အီဗလီန်နှင့်အိပ်ရာထဲတွင်အဝတ်မရှိ၊ သို့သော်သူတို့လိင်ဆက်ဆံသည့်အတွက်သင့်တော်သည်။ (Ugh!)
ကားဂိုဒေါင်ထဲမှာမြင်ကွင်းကဘာလဲ ငါ Walden နှင့် Alan ရဲ့ကားများနှိုင်းယှဉ်အလန်ရဲ့မကြာခဏအလွန်ရယ်စရာယုတ်ညံ့ကိစ္စများဆီသို့ကောင်းစွာကစားကြောင်းရပေမယ့်မြင်ကွင်းတစ်ခုအလန်လုပ်ဖို့နည်းနည်းပေးပေမယ့် Walden သည်သူ၏စပ်ကားတစ်စီးအကြောင်းကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကလေးဆန်သောနည်းနည်းပြုသကဲ့သို့စောင့်ကြည့်
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ချာလီရဲ့ဂျာနယ်စိတ်ဓါတ်များအဖြစ်အရည်အချင်းပြည့်မီသောအရာကိုကျွန်တော်တို့ကိုပေး၏ နှစ် ဦး နှင့်တစ်နှစ်ခွဲယောက်ျား ။ Alan သည်ပြီးခဲ့သည့်ရာသီကထွက်ခွာရန်အလန်အားသူ၏တုံ့ပြန်မှုအားပြန်ပြောပြသည့်စာပိုဒ်တစ်ပိုဒ်ကိုဖတ်သည်။ Alan သည်မနေ့ကသူ့ရည်းစားနှင့်သူမဘယ်လောက်မိုက်မဲသလဲ။ ကောင်းပြီအိုးသူမသတ်သတ်မှတ်မှတ်ဆီးရောဂါကူးစက်မှုကဲ့သို့အရေးမထားဘူး၊ သူဟာမကြာခင်သူပြန်လာလိမ့်မယ်လို့သေချာတယ်။ အမှန်အတိုင်းပြောရရင်၊ ငါဟာတကယ်တော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြေးနိုင်တဲ့ရေဘူးထဲကိုလွတ်သွားတာပါပဲ။
မင်းမဲ့စရိုက်ရာသီ6ဇာတ်လမ်းတွဲ 13 ပြန်လည်သုံးသပ်၏သားတို့
Holmes ရာသီ3ဇာတ်လမ်းတွဲကို Sherlock 3
အခြားအ Hulk ရုပ်ရှင်ထွက်လာမယ့်ရှိသေး၏